फ्रान्सेली क्रान्ति पुस्तकहरू
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 1
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 2
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 3
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 4
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 5
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रस शब्द # 6
फ्रेन्च क्रान्ति क्रसवर्डहरू
फ्रान्सेली क्रान्ति कागजात
फ्रान्सेली क्रान्ति निबन्ध प्रश्नहरू
फ्रान्सेली क्रांति शब्दकोष एके
फ्रान्सेली क्रांति शब्दकोष LZ
फ्रान्सेली क्रान्ति ग्राफिक्स
फ्रान्सेली क्रान्ति इतिहासकारहरू
फ्रान्सेली क्रान्ति मानचित्र
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1789-91
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1792-95
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1788 मा
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - समूहहरू
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - विचारहरू
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - नेताहरू
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज - सर्तहरू (I)
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - सर्त (II)
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति स्मृति प्रश्नोत्तरी - सर्त (III)
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी मेमोरी क्विज
फ्रेन्च क्रान्ति को उच्चारण
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 1
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 2
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 3
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 4
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 5
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति प्रश्न # 6
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रान्ति नव शुरुआतहरूको लागि
फ्रान्सेली क्रान्तिले क्विज गर्छ
फ्रेन्च क्रान्ति विषयहरू
फ्रान्सेली क्रान्ति क्रिसमस
फ्रान्सेली क्रान्ति जसले को हो
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - अवधारणा
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - घटनाहरू
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - व्यक्ति
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति wordsearch - स्थानहरू
फ्रेन्च क्रान्ति क्रान्ति wordsearches
फ्रांसीसी क्रांति क्रान्तिकारीहरू, महत्वाकांक्षी कुलीनहरू, उच्च करहरू, असफल फसलहरू, खाद्यान्न अभाव, भोका किसानहरू, क्रोधित शहरवासी, लि sex्ग, झूट, भ्रष्टाचार, भीड हिंसा, कट्टरपन्थी र अजीब, अफवाह र षडयन्त्र, राज्य द्वारा स्वीकृत आतंक - हामी क्रान्तिकारीहरूसँग सम्बन्धित सबै थोकहरूसँग थियौं। र टाउको काट्ने मेशिनहरू।
आधुनिक युगको पहिलो क्रान्ति नभए पनि फ्रान्सेली क्रान्ति यस्तो उपाय बनेको छ जसको बिरूद्ध अन्य क्रान्तिहरू तौलिएका छन्। 18th शताब्दी फ्रान्स मा राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल लाखौं मानिसहरूले अध्ययन गरेका छन् - विद्वानदेखि लिएर उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरूमा। को बास्टिलको आँधीबेहरी जुलाई 14th 1789 पश्चिमी इतिहासको एक परिभाषित क्षणहरू मध्ये एक भएको छ, क्रान्तिमा मानिसहरुको एक आदर्श आदर्श वाक्य। पुरुष र महिला क्रान्तिकारी फ्रान्सका - लुईस XVI, माई एटोटोनेट, मारक्विस डे लफायेट, सम्मान मिराबेउ, जर्जस ड्यानटन, जीन-पॉल माराट, म्याक्सिमिलिन रोबेस्पियर र अन्य - अध्ययन गरिएको छ, विश्लेषण गरिएको छ र व्याख्या गरिएको छ। इतिहासकारहरू फ्रान्सेली क्रान्तिलाई मूल्याating्कन गर्न दुई शताब्दी भन्दा बढी समय बिताइसक्यो, यो निर्णय गर्ने कोसिस गर्दै कि यो प्रगतिको छलांग हो वा बर्बरवादको एक वंश हो।
पहिलो नजर मा, फ्रान्सेली क्रान्ति को कारणहरु स्पष्ट देखिन्छ। 18th शताब्दीको अन्ततिर फ्रान्सका मानिसहरूले शताब्दीयौं असमान असमानता र शोषण सहनुपरेको थियो। प्रचलित सामाजिक पदानुक्रमलाई आवाश्यक हुन्छ तेस्रो सम्पत्ति, देशका साधारणहरू, कर कार्यको भार उठाउँदा यसको कार्य गर्नका लागि। राजा वर्साइल्समा भर्चुअल एक्लोनेसनमा बस्नुहुन्थ्यो, उनको शाही सरकार सिद्धान्त मा निरंकुश तर वास्तविकता मा अप्रभावी। राष्ट्रिय कोषागार लगभग खाली थियो, कुप्रबंधन, अकुशलता, भ्रष्टाचार, व्यर्थ खर्च र विदेशी युद्धमा सहभागिताले खेर गए।
1780 लेटमा, राजाका मन्त्रीहरू वित्तीय सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरिरहेका थिए। प्रस्तावित कर सुधारसम्बन्धी विवादको रूपमा शुरू भएको कुरा छिट्टै राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनको आन्दोलनमा परिणत भयो। मा एक टकराव सामान्य जनरल 1789 को मध्यमा एक राष्ट्रीय सम्मेलनको गठन भयो, जुन धेरै क्रान्तिकारी सरकारहरू मध्ये पहिलो थियो। यी घटनाहरूले कुनै खतरा वा रक्तपात बिना नै सत्तामा शान्तिमय संक्रमण सम्भव भएको सुझाव दिए। आगामी हप्ताहरूमा, लोकप्रिय हिंसाको लहर - पेरिसमा, गाउँमा र भर्साइलमा नै - एक रगत क्रान्ति आउँदा संकेत।
अल्फा ईतिहासको फ्रान्सेली क्रान्ति क्रान्ति वेबसाइट फ्रान्समा लेट 1700 मा घटनाहरूको अध्ययनका लागि एक व्यापक पाठ्य-गुणवत्ता संसाधन हो। यसले विस्तृत सहित 500 बिभिन्न प्राथमिक र माध्यमिक स्रोतहरू समावेश गर्दछ शीर्षक सारांश, कागजातहरू र ग्राफिक प्रतिनिधित्व। हाम्रो वेबसाइट मा सन्दर्भ सामग्री पनि समावेश छ नक्सा र अवधारणा नक्शा, टाइमलाइनहरू, शब्दावलीहरूएक 'को हो' र जानकारी इतिहास लेखन र इतिहासकारहरु। विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो ज्ञान परीक्षण गर्न सक्दछन् र सहित अनलाइन गतिविधिहरूको दायराको साथ रिकल गर्न सक्छन् quizzes, शब्दकोष र wordsearches.
प्राथमिक स्रोतहरूको अपवाद बाहेक, अल्फा ईतिहासमा सबै सामग्री योग्य शिक्षक, लेखक र ईतिहासकारहरू द्वारा लेखिएका हुन्। यस वेबसाईट र यसका योगदानकर्ताहरू बारे अधिक जानकारी यहाँ फेला पर्यो.
प्राथमिक स्रोतहरूको अपवादको साथ, यस वेबसाइटमा सबै सामग्रीहरू pha अल्फा ईतिहास 2018-19 हो। अल्फा ईतिहासको अभिव्यक्त अनुमति बिना यो सामग्री प्रतिलिपि गर्न, पुन: प्रकाशित वा पुनः वितरण गर्न मिल्दैन। अल्फा ईतिहासको वेबसाइट र सामग्री को उपयोग को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया हाम्रो सन्दर्भ गर्नुहोस् उपयोग नियम.
यस फ्रान्सेली क्रान्ति क्रान्ति साइटले 1781 र 1795 बीच फ्रान्समा घटनाहरूमा लेखहरू, स्रोतहरू र परिप्रेक्ष्यहरू समावेश गर्दछ। यो साइट अल्फा ईतिहास द्वारा बनाईएको र राखिएको हो। यसले 228,547 पृष्ठहरूमा 353 शब्दहरू समावेश गर्दछ र अन्तिम पटक जुलाई 31st 2019 मा अपडेट गरिएको थियो। थप जानकारीको लागि हाम्रो FAQ पृष्ठ वा प्रयोग सर्तहरू भ्रमण गर्नुहोस्।